တရုတ် C20 Arbore, C20-FMB22 Arbore, Shell ကစက် Arbore တင်ပို့သူများ
Home > ထုတ်ကုန်များ > tool ကိုရှင်C20 Arbore
C20 Arbore ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, C20 Arbore, C20-FMB22 Arbore ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Shell ကစက် Arbore R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
High Quality C25-FMB27 မျက်နှာစက် Arbore
High Quality C20-FMB22 Shell ကစက် Arbore
Supply နိုင်ခြင်း: 5000PCS/MONTH
High Quality C25-FMB27 မျက်နှာစက် Arbore specification 1. ပစ္စည်း: 45 # သံမဏိ 2. ခွန်အား: HRC44-48 3. ရှေ့နှင့်နောက်ကျောမှာ6မြောင်းလမ်း Are 4. ရိုးသားစွာဝန်ဆောင်မှု အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏...
High Quality C20-FMB22 Shell ကစက် Arbore specification 1. ပစ္စည်း: 45 # သံမဏိ 2. ခွန်အား: HRC44-48 3. ရှေ့နှင့်နောက်ကျောမှာ6မြောင်းလမ်း Are 4. ရိုးသားစွာဝန်ဆောင်မှု အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏...
တရုတ်နိုင်ငံ C20 Arbore ပေးသွင်း
ထိုသို့သောစသည်တို့ကို jig ပျင်းစရာစက်, အလျားလိုက်ပျင်းစရာစက်, ကြိတ်စက်, CNC စက်သကဲ့သို့, စက်ကိရိယာအဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်
ခြေလှမ်းတွင်းစသည်တို့ကိုဖြတ်တောက် Ang အတွင်းစိတ် Ang အပြင်ဘက် groove boring, အပြင်ဘက်အချင်းပျင်းစရာအတွင်းပိုင်း, facing ကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှက
ငါတို့သည်သင်တို့ C20-FMB22 Arbore, Shell ကစက် Arbore ဝယ်ဖို့ချင်လျှင်, အကြှနျုပျတို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ, တရုတ်အတွက် C20 Arbore ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးလုံးဝဖောက်သည်ကြောင်းအသုံးပြုမှုကိုစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေခွင့်အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ TELI Tool ကိုစက်ရုံအဓိကအားဖြင့်, ထို Edge Finder ကို inclduing, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူများစီးရီးထုတ်လုပ်
ER Collet, BT40 ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို Shanks, BT40 Collet Chuck, ဒါပေါ်မှာ CNC တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ, GT24 နှိပ် collets, keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck နှင့်။
PB Precision MAS403 BT40-ETP32-100 Tool များ Holder
PB Precision MAS403 BT40-TER32-100 Tool များ Holder
BT40 စီးရီး collets tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ
SK40-ER32-100 Collet Chuck ကိုင်ဆောင်သူ
SK ကို / DAT / JT ဘေးထွက် Lock ကိုအဆုံးစက် Arbore
သငျ့ taper နှင့်အတူ 13mm Key ကို type ကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Shell ကစက် Arbore